China yekurara 24w 36w Ruvara Kuchinja Inogoneka Remote Kudzora Smart Acrylic Kuvhara Round Kwakatungamirwa Ceiling Mwenje Mugadziri uye Mutengesi | Aina
Indoor akatungamira mwenje girobhu racho
Filament girobhu racho
Akatungamirira Emergency girobhu racho
Smart LED Girobhu Inotungamirirwa neMobile
Akatungamirira girobhu racho pamwe Motion Switch uye Light Switch
Akatungamira T8 Tube ine G13 Base
Sanganisa LED T8 Tube
Akatungamirira Tube furemu
Akatungamirira Emergency Tube
T8 Tube Chitatu-Chinoratidza Dzimba
T8 Tube ine Rada
Yakajairwa LED Ceiling Mwenje
Yakakosha Dhizaina Ceiling Mwenje
Akatungamirira Emergency Ceiling Light
Akatungamira Panel Chiedza uye Panel Pasi Chiedza
Akatungamira Panel Pasi Chiedza
Akatungamira Linear Strip Chiedza
LED Rwendo Rwechiedza Chiedza
Akatungamira Linear High Bay Chiedza
Akatungamira UFO High Bay Chiedza
UV Sterilization Chiedza
Akatungamira Spot Mafashama Mwenje
Akatungamira Shoe Bhokisi Chiedza
Imwe LED Street Chiedza
Akatungamira Canopy Chiedza
Akatungamira Solar Lighting
Akatungamira Solar Street Chiedza
Zvese mune imwechete Solar Light
Akatungamira Solar Mafashama Mwenje
Zvimwe LED Solar Lighting
Zvimwe Mwenje we LED
Akatungamira Wall Light
Akatungamira Kushongedza Mwenje
Imba yekurara 24w 36w Ruvara Kuchinja Inogoneka Remote Kudzora Smart Acrylic Kuvhara Round Kwakatungamirwa Ceiling Mwenje
Shandisa Kubatanidza LED module mwenje sosi
module ine mhando yakanaka yeLens dhizaini, uye iyo chete lens inoita kuti mwenje uwedzere kuenzanisa uye kupenya, pasina nzvimbo ine rima.
Shandisa 2835 yakakwira CRI, yakaderera kudyiwa, hupenyu hwakareba hurefu uye kudzikira kudzikira SMD. standard tembiricha tembiricha, hapana kudzima.
International standard mutyairi ane IC zvikamu:
International standard mutyairi apfuura CE ROSH SAA TUV chitupa.
Yakakwirira ruvara LED: Iko kushandiswa kwemhando yepamusoro ye LED mwenje marozari, akafanana nechiedza chechisikigo, pasina kudzima, pasina radiation, hupenyu hwakareba. Simba-kuchengetedza maziso, chengetedza runyararo rwepfungwa.
Yakakwira mhando Iron zvinhu: Yakakwira-mhando simbi zvinhu mwenje mubati wakatsiga, kwete akaremara.
Simba 24W / 36W Input AC220-240V
Saizi 350 / 400mm Rinoshanda 3 magiya
Garandi 3 makore Nguva yekugadzira Mazuva 8-10
Chitupa CE, ROHS IP IP20
Akatungamirira SMD 2835 Nguva yehupenyu Maawa 30000
Tine chibvumirano nemakambani makuru emakambani, uye tinoona kuti tinokwanisa kupa yakaderera kuendesa mutengo kupfuura mamwe makambani. Zvichakadaro, isu tinogona kupa akasiyana logistic zvirongwa zvevatengi sarudzo.
2. Musangano / Kamuri yemusangano
3. Fekitori & Hofisi
4. Nzvimbo dzekutengesa
5. Residential / Institution Building
6. Chikoro / Koreji / Yunivhesiti
8. Nzvimbo dzinoda kuponesa magetsi uye neruvara rwakakwirira kupa mwenje indekisi
1.For kubvunza kwako kwese nezvedu kana zvigadzirwa zvedu, isu tinokupindura zvakadzama mukati maawa 24.
2.Tine dudziro yakanaka, kushingaira kutengesa uye sevhisi vanogona kutaura zvakatsetseka mumutauro weChirungu.
3.Professional munhu ataure newe usati waodha.
4.Provide yakakwana post-sale sevhisi, kusanganisira kuisirwa, technical gwara.
5.Provide yakasimba mhando cheki yechikamu chimwe nechimwe, yega yega maitiro pamberi pekunze.
6.OEM & ODM, zvakare ipa yakagadziriswa sevhisi.
Dhizaini: Isu tine dhizaina timu yevanhu gumi vanoshandira edu ega sarudzo uye zvakare yeOEM / ODM sevhisi. Kutipa zano, isu tinokupa mhinduro iwe zvigadzirwa zvakakwana kana mhinduro
Kugadzira: Isu tine yakakosha yekugadzira michina, machira ehupfu, kuungana, kuchembera uye kuongorora mhando neyedu inodarika zana michina yedhijitari uye nesilamu inoshanda ream.
Kudzora kwemhando yepamusoro: Tinogara tichisarudza panting yakanakisa, uye zvakanyanya kukosha isu tinopedzera simba redu pane cheki yemhando nhanho dzese kuti uve nechokwadi chekuti chidimbu chimwe nechimwe chakapihwa mutengi chakakwana
Pashure: Mazuva ano 4-Mahombe Mashizha Anovhenekera Flush Mount Kudenga Mwenje Mwenje Chigadziro cheImba
Zvadaro: Zvitsva Zvigadzirwa Kurarama Kamuri Gig Kutenderera Yemazuva Ano Kwakatungamirwa Kwekunze Ceiling Mwenje Ruvara Kuchinja
Q1. Ini ndinogona here kuva neyambiro yekuenzanisira yechigadzirwa chedu?
A: Hongu, tinogamuchira sampuro yekuraira uye kuongorora mhando. Sanganisa mienzaniso inogamuchirwa.
Q2. Ko nezve kutungamira nguva?
A: Muenzaniso unoda mazuva matatu kusvika mashanu, kuwanda kwekugadzira nguva inoda 1-2 mavhiki ekuraira huwandu kupfuura
Q3. Unotumira sei zvinhu uye zvinotora nguva yakareba sei kuti usvike?
A: Isu tinowanzo kutumira neDHL, UPS, FedEx kana TNT. Kazhinji zvinotora mazuva 3-5 kusvika. Ndege uye kutumira kwegungwa zvakare kusarudza.
Q4. Maitiro ekuenderera sei odha yezvigadzirwa zvedu?
A: Kutanga tiudzei zvamunoda kana kunyorera.
Chechipiri Tinotora maererano nezvamunoda kana mazano edu.
Chechitatu mutengi anosimbisa iwo masampuli nenzvimbo dzinoisa dhizaini.
Chechina Tinoronga zvigadzirwa.
Mazuva ano 4-Rombo Mashizha Kuvhenekera Flush Mount Ceil ...
siringi mwenje neakasiyana dhizaini dhizaini
Yakasarudzika Dhizaini Ceiling Mwenje 24W / 36W
CCT siringi mwenje